डिसेम्बर 11, 2017 – 2माछा
घर / डिसेम्बर 11, 2017
यशैया 35: 1- 10
35:1 यो उजाड र दुर्गम भूमि आनन्दित हुनेछ, र एकान्त को ठाँउ exult हुनेछ, र यो लिली जस्तै फलिफाप हुनेछ.
35:2 यो माथि र फूल वसन्त हुनेछ, र यो आनन्दित र प्रशंसा संग exult हुनेछ. लेबनान महिमा यो दिइएको छ, कार्मेल र शेरोन को सौन्दर्य संग. यी प्रभुको महिमा र हाम्रो परमेश्वरको सौन्दर्य देख्न हुनेछ.
35:3 यो LAX हात बलियो, र कमजोर घुँडा पुष्टि!
35:4 यो fainthearted गर्न भन्नुहोस्: "साहस र डर छैन लिनुहोस्! हेर, आफ्नो परमेश्वरको प्रतिकार को vindication ल्याउनेछ. परमेश्वरले आफूलाई तपाईं बचत गर्न पुग्नेछौँ। "
35:5 त्यसपछि अन्धा आँखा खोलिनेछन्, र बहिरो को कान खाली गरिनेछ.
35:6 त्यसपछि अशक्त एक buck जस्तै Leap हुनेछ, र बोल्न नसक्ने को जिब्रो untied गरिनेछ. यो पानी मरुभूमि मा निस्कने फट छन् लागि, एकान्त ठाउँमा र खोलाहरू बग्नेछन्.
35:7 अनि सुक्खा थियो कि देशमा एक तालाब हुनेछ, र तिर्खाएको भूमि पानी फव्वारे हुनेछ. यो serpents अघि बस्थे जहाँ hollows मा, ईख र bulrush को greenery त्यहाँ माथि वृद्धि हुनेछ.
35:8 अनि एक बाटो र ठाउँ मा एक सडक त्यहाँ हुनेछ. र यो पवित्र मार्ग भनिन्छ गरिनेछ. यो यो माध्यम पार गर्नेछ defiled. यस लागि तपाईं को लागि एक ठीक बाटो हुनेछ, यति को मूर्ख यो साथ लक्षविना हिड्नु छैन भनेर.
35:9 त्यस स्थान मा कुनै सिंह हुनेछ, र हानिकारक जंगली जनावर न यो माथि चढ्नु हुनेछ, न त त्यहाँ पाउन. केवल मुक्त गरिएको भएकाहरूलाई भनेर ठाँउ हिंड्न हुनेछ.
35:10 अनि प्रभुको मुक्त परिवर्तित हुनेछ, र तिनीहरूले प्रशंसा संग सियोन फर्कन हुनेछ. र अनन्त आनन्द आफ्नो टाउको मा हुनेछ. तिनीहरूले gladness र आनन्दित प्राप्त हुनेछ. दुखाइ र दुःख लागि दूर भाग्नेछ.
लूका 5: 17- 26
5:17 र यो भयो, एक निश्चित दिनमा, उहाँले फेरि बस्नुभयो कि, शिक्षण. र नजिकका बसिरहेका व्यवस्था को फरिसी र डाक्टर थिए, जो गालीलको र यहूदियामा र यरूशलेमको हरेक शहर देखि आएका थिए. अनि प्रभुको शक्ति वर्तमान थियो, तिनीहरूलाई निको पार्न.
5:18 अनि हेर, पक्षाघात थियो केही मानिसहरू एक मानिसको ओछ्यानमा मा पूरा गरियो. अनि तिनीहरूले उहाँलाई ल्याउन एक तरिका खोजे, र उहाँलाई अघि उहाँलाई राख्न.
5:19 अनि तिनीहरूले उहाँलाई ल्याउन सक्छ जो एक तरिका भेट्टाउने छैन, भीड को किनभने, तिनीहरूले छत सम्म climbed, र तिनीहरूले आफ्नो ओछ्यानमा संग छत टाइल माध्यम उहाँलाई तल गरौं, तिनीहरूका बीचमा मा, येशूको सामने.
5:20 अनि उहाँले आफ्नो विश्वास देखे, उहाँले भन्नुभयो, "मानिस, आफ्नो पाप तपाईं क्षमा भएका छन्। "
5:21 अनि शास्त्री र फरिसीहरूले सोच्न थाले, यसो: "यो को हो, जो बोल्ने blasphemies छ? कसले पाप क्षमा गर्न सक्षम छ, एक्लै परमेश्वरको बाहेक?"
5:22 तर येशूले तिनीहरूको विचार थाह पाउँदा, प्रतिक्रिया, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "तपाईं आफ्नो हृदयमा के सोच रहे?
5:23 कुन भन्न सजिलो छ: 'तपाईंको पाप तपाईं क्षमा छन्,'या भन्न, 'उठेर र हिंड्न?'
5:24 तर यति तपाईं मानिसको पुत्र पाप क्षमा गर्न पृथ्वीमा अख्तियार छ भनेर थाहा हुन सक्छ कि,"उहाँले paralytic भन्नुभयो, "म तिमीहरूलाई भन्दछु: उठेर, आफ्नो ओछ्यानमा लिन, र आफ्नो घर जान। "
5:25 अनि एकैचोटि, आफ्नो दृष्टि मा माथि बढ्दो, उहाँले झूट थियो मा त्यो ओछ्यानमा उठाए, र उहाँले आफ्नै घरमा दूर गए, आवर्धक परमेश्वरको.
5:26 अनि अचम्म सबैको पकड गरे, र तिनीहरूले परमेश्वरको आवर्धक थिए. अनि तिनीहरूले डर भरिएको थियो, यसो: "लागि हामी चमत्कारको आज देखेको छु।"